Maxaa Cusub – Page 49 – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub Wararka Gudaha
NEWYORK TIMES: Qadar Oo Daacishta Soomaaliya U Adeegsaneysa Dagaalka Ay Kula Jirto Imaaraatka [Warbixin].
Wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo Newyork Times ayaa soo daabacay warbixin dheer oo uu ku faaqidayo loolanka Soomaaliya ku dhexmaraya dowladaha carbeed ee Khaliijka, kaas oo uu ku tilmaamay mid faraha ka baxay oo loo adeegsanayo waxwaliba oo suuragal ah. Wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo Newyork Times ayaa […]
Daawo Video: Alkataa’ib Oo Filim Kasoo saartay Mid kamida Dagaalladii ka dhacay Gobolka Sh/dhexe.
Mu’asasada AlKataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay qeybtii 13aad ee silsilada Fasharid Bihim oo lagu soo bandhigayo weerarkii xoganaa ee lala beegsaday xildhibaanadii HiirShabelle ee ku socdaalayey wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Jowhar. Filimka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa weerar kale oo lagu qaaday maleeshiyaatka ku sugan […]
Dhageyso: Sheekh Abuu Muscab Oo Shir Jaraa’id Ku Faah Faahiyay Weeraro ka dhacay dalka Soomaaliya.
Taliska ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidanka Al Shabaab ayaa shir Jaraa’id oo uu qabtay ku faah faahiyay weeraro khasaara badan lagu garsiiyay ciidamada […]
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku dhintay Weerar ka dhacay GEDO.
Qaraxa maanta duhurkii ciidamo katirsan kuwa Itoobiya lagula eegtay meel u dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa laga helayaa faafahinno dheeri ah oo ku aadan khasaaraha. Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo aan soo xiganeyno ayaa noo xaqiijiyay in khasaaraha gaaray ciidamada Itoobiya uu marayo dhimashada 10 askari, iyo […]
Gaari Weyn oo Kenya Looga Gubay Mandheera.
Wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumeysato ayaa sheegaya in Guutada Qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab ay qarax ku basbeeliyeen gaari weyn oo xambaarsanaa askar Kenyaati ah. Gaarigan ayaa waxaa saarnaa ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa degaanka looga yaqaano (Afduubta) waxaana weerarkan uu haleelay barqanimadii maanta. Ilo wareedyo […]
Video+Sawirro: Beeraha Dalkeena Maan Ku Baahi Beelno Q-2aad (Gobolka Bay)
Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-furqaan waxay idiin soo gudbineysaa warbixin muuqaal ah oo ay ka diyaarisay wax soo saarka gobolka Bay, gaar ahaan Beeraha. Warbixintan oo ah qeybta labaad ee silsiladda (Beeraha dalkeena maan ku baahi beelno) ayaa waxay kuu soo bandhigeysaa heerka wax soo saar iyo horumarka gobolka, waxayna […]
Dhageyso Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Bayaankii Al-Shabaab Ee Ku Socday Odayaasha Xildhibaanada Xulay.
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Halkan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa barnaamijka Diiradda Jimcaha oo todobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhageystaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan iyadoo lagu soo […]
Kaydka Sawirada Maxaa Cusub Uncategorized Wararka Gudaha
Beesha Eelaay oo Ugaas Ku Dooratay Jubooyinka. (Sawirro)
Beeesha Eelaay qaybteeda Jubbooyinka degta ayaa dooratay isla markaana caleema saaratay Ugaas cusub kadib munaasabad ka dhacday Deegaanka Jawaarey oo hoostaga degmada Saakoow ee Wilaayada Jubooyinka. Munaasbadda oo ay ka muuqatay in si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu caleema saaray Ugaas Abuukar Maxamed Daahir, waxaana ka soo […]
Qarax ka dhacay degmada Waaberi.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa qarax lagula beegsaday qeybo kamid ah degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Qaraxa waxa uu haleeley gaari ay saarnaayeen ciidamada dowladda, waxaana lagu soo waramayaa inuu jiro waxyeello gaartay ciidanka. Goobjoogayaal ayaa noo xaqiijiyay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 2 askari oo kamid ahaa ciidankii […]
Ciidamo Itoobiyaan ah oo Ku dhintay Qarax ka dhacay deegaan katirsan Gobolka Hiiraan.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo ciidamo Itoobiyaan ah lagula beegsaday deegaan dhaca bartamaha dalka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax xooggan lala beegsaday ciidamo Itoobiyaan ah xilli ay ku socdaalayeen gudaha deegaanka. Goob joogayaal ayaa sheegay in […]
Gudoomiye Qarax ka bad baaday iyo askar la dilay hubna laga qaatay.
Taliye sigtay iyoo ilaaladiisi oo qarax ku dhintay.
weeraro ka dhacay Hiiraan, Baay iyo Jubada hoose.
DHEGEYSO XUKUN QISAAS AH OO KA DHACAY GOBALKA BAAY.
ALshabaab iyo weeraro dhiig ku daatay fulisay.
Copyright © 2021 Shabakadda Amiirnuur. Designed by WPZOOM